Izakhelo zePoyinti zaMandla opopayi zasimahla | Creatives Online
UMary Rose | | itemplates
Amandla Point inkqubo yokubonisa imizobo, que Qhubekaiene ukubazas de engaphantsiokanyeAngleivuliwe de la ngokufanayoa Ndodaxesha que un libro tiene hohayi. Se puede kudalaar diapibhereiivathi que Qhubekaenndaphumelela umbhaloo, gráficos, imágenes, unyanaumkile, Njl. Sirve for isiphoar las izimvo, Ngcamangoos, proyectos, Njl., que vamos a desarrollar, ya Ulwandle en una clase, dibana kwakhonaiivuliwe, Njl. Kuyanceda ukushwankathela izihloko, kwenza ulwazi lucace ngakumbi, lula ukuqonda. Ngaphakathi ayamathanga a alIMacenar yazisaAngleivuliwe y la kudeubambouye de Ndodaxesha miseloenada y ezibonwayo.
Kodwa oku akupheli apha, kwaye ukuba ubungazi, kukho iitemplates ezinoopopayi. Ngabo uya kwenza ukuba abaphulaphuli bakho beze kuwe ngcono, kuba umboniso omileyo awuvelisi ntshukumo, ngelixa i-animated isenza. Apha sichaza izibonelelo zayo kwaye sikushiya ezi-5 zasimahla kunye neetemplates zePower Point.
1 Ukubaluleka kwetemplates ezinopopayi
2 Iitemplates zePowerPoint ezi-5 zasimahla kunye nezinyakazayo
2.1 Isicwangciso soShishino lobuNkokheli beeMveliso
2.2 Uyilo olunemibala kunye noluncinci lweentlanganiso
2.3 Ukuwa kwekhephu oopopayi
2.4 Ithemplethi yePowerPoint yesigqeba seshishini
2.5 Isakhelo seGreen PowerPoint esiphilayo
Ukubaluleka kwetemplates ezinopopayi
Las isiphoisenzoes oopopayiadas unyana una indlela esebenza kakhulu yokunxibelelana ngolwazi kubaphulaphuli. Una isiphoAngleivuliwe oopopayiada puede desarrollar una balisaatudoti gqibezelata nge la que uno puede Qhubekaar una Imbaliia, Thumelair una sekileuintlaka de izimvo, qhumaicar un Ngcamangoo, dar una UkuqhelanisaAngleivuliwe, ipromocionar un imvelisoo, uhloboíimpunduo, inkonzoio, umtshatoca o Persona, Njl. Con una yoku se puede:
Cacisa iingcamango ezintsonkothileyo, uzinxulumanise kwaye uzibonise ngokubonakalayo nge una gran cacisainto.
CuNdihamba ngenyawo se traba nge una isiphoAngleivuliwe oopopayiada, se puede lumlenzear a una ukuqonda ngakumbi koluntu.
Con una isiphoAngleivuliwe oopopayiada, se puede ukuvakalisa zonke iintlobo zeengcamango, desde Los mI-ás simndiyacela y pasar a Los mI-ás gqibezelajos.
Ezi pueden ukuba Iluncedoizadas en iintetho zoshishino, iiblogs, amaphepha ewebhu kunye neentetho zequmrhu.
Ukukhonza for ukukhuthaza iimveliso, iinkonzo, iimpawu kunye / okanye abantu.
Ba no kukwazi uncedo kwi ukuphucula umfanekiso wenkampani kunye nokuma kwebhrendi.
Las isiphoisenzoes oopopayiadas pueden ukuba Iluncedoizadas como una aphai-ramintoa de comunicAngleivuliwe for velisa imvakalelo eyakhayo kubaphulaphuli.
Iitemplates zePowerPoint ezi-5 zasimahla kunye nezinyakazayo
Isicwangciso soShishino lobuNkokheli beeMveliso
Umthombo: iZilayidi zikaGoogle, apha Unalo ikhonkco lokukhuphela le ntetho.
Le template ine a inkangeleko yobuhle, kwaye kunjalo igxile kwizicwangciso zoshishino kwiimveliso. Iqulethe imizobo, iitheyibhile, iimephu, kunye nedatha yesampulu onokuthi uyifune ukubonisa amaqabane akho. A Umzilavewe de Los iindiza de NONEocio de linkokeliazgo de imvelisoo se puede iifayileukubaar el imbizaeninto de kudalacimintoo de la empuhambo.
Ezona templates zobuhle bomboniso wakho
Ihlelwa ngokupheleleyo kwaye awuyi kuba nabuphi na ubunzima ekuyilungiseni. Inezilayidi ezili-13 zizonke zemithunzi epinki nebhlowu. Ikwanegrafiki ehlelekayo, iimephu, kunye nemockups. Njengoninzi lweentetho zeSilayidi zikaGoogle, inee-iyikhoni ezingaphezu kwama-500 kunye neplagi yeFlaticon ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso izilayidi zakho.
Uyilo olunemibala kunye noluncinci lweentlanganiso
Ukuba usebenzisa le ngcaciso-ntetho intshumayelo yakho iya kuyeka ukukruqula, ekubeni ngolu yilo lutsha lombala, uya kubamba ingqalelo yakhe nawuphi na umbukeli. Iqulethe i-gradients kwi-shades eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nepinki emfusa. Imizobo eyibandakanyayo iyahlelwa ngokupheleleyo. Ikwabandakanya iiplani ezininzi apho ukongeza ulwazi olufana nohlalutyo lwe-SWOT okanye ishedyuli yeprojekthi.. Idalwe ngokukodwa ukuba ilungiswe kwi-Power Point. Inezi mpawu zilandelayo:
100% iyahlelwa kwaye kulula ukuyilungisa
Inezilayidi ezili-13 zizonke
Zonke izinto ezinje ngeetshathi, iimephu kunye nemockups ziyahleleka
Inee-icon ezingaphezu kwama-500 kunye neplagi yeFlaticon ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso izilayidi.
Inomlinganiselo we-16: 9
Iqulethe ulwazi malunga nefonti, umbala kunye nophawu lwemithombo esetyenzisiweyo.
Ukuwa kwekhephu oopopayi
ISilayidi sikaGoogle saziwa kakhulu ngeetemplates zayo zokubonisa. Bahlala bezama ukumangalisa abasebenzisi, kuxhomekeke kumaxesha onyaka ahlukeneyo. Le template ingasetyenziselwa imixholo ehambelana nobusika okanye ikhephu.
Ngokuphathelele iimpawu ezivezwa yile template, sifumana oku kulandelayo:
Ihlelwa ngokupheleleyo kwaye kulula kakhulu ukuyilungisa.
Inezilayidi ezahlukeneyo ezili-13.
Imizobo ekuyo kulula ukuyihlela (imephu, iitheyibhile, amaxesha, kunye nemockups).
Iyonke iqulethe ii-icon ezingaphezu kwama-500, kwaye inika ithuba lokwenza isilayidi sakho sibulela ulwandiso lweFlaticon.
Yenzelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kwiMicrosoft PowerPoint.
Inefomathi ye-16: 9, ilungele nasiphi na isikrini.
Ithemplethi yePowerPoint yesigqeba seshishini
Umthombo: Imodeli yesilayidi, apha unekhonkco lokukhuphela le nkcazo
I-Business Executive PowerPoint Template ngumboniso wesilayidi wale mihla Isetyenziselwa ukubonisa iinkcazo zoshishino ezinomtsalane. Inezilayidi ezili-12 zizonke ezithimba ingqalelo yabaphulaphuli ngenxa yoopopayi bazo. Enkosi kwimvelaphi egudileyo kunye nemixholo eluhlaza kunye neblue gradient, yongeza ukuchukumisa ubuchwephesha kwiprizenteyishini iyonke.
Ikwanazo nezilayidi eziluncedo ezifana namaqweqwe, izilayidi zombhalo, iitshathi, kunye nedayagramu. Umzekelo, le ntetho isetyenziselwa ukubonisa kwintlanganiso inkqubela yeprojekthi, imeko yaloo projekthi.
Isakhelo seGreen PowerPoint esiphilayo
Umthombo: Imodeli yesilayidi, apha unayo ikhonkco.
Le template inombono wokufudumala kwehlabathi kunye nefuthe elinalo kwindalo. Ngokusetyenziswa kwale template yopopayi yePowerPoint yasimahla, umntu oyisebenzisayo unokudala iintetho ezisebenzisanayo ezigxininisa ngakumbi ukuba iinkampani ziyalwazi utshintsho lwemozulu.
Imizobo esetyenziswe kule nkcazo-ntetho ukunceda ukugxininisa ukukhula okunomtsalane kwamandla ahlaziyekayo ukuxhasa uzinzo lwenkampani. Isebenzisa i-infographics ecacileyo kunye ne-interactive, engasetyenziselwa ukubonisa idatha yezibalo ezahlukeneyo ezinxulumene nomboniso. Le template ine-16: 9 ifomathi, iyafumaneka I-PowerPoint 2007, I-PowerPoint 2010, I-PowerPoint 2013, I-PowerPoint 2011 iMac, PowerPoint 2016 kunye PowerPoint 2016 Mac phakathi kwabanye.
Apha sikushiya a unxibelelwano, ukuba ufuna ntoni na iitemplates zamandla angatshintshiyo. Siyathemba ukuba esi sithuba sibe luncedo kuwe kwaye wenze iinkcazo-ntetho zakho zingakruquli kakhulu ngezi templates zasimahla kunye neziphilileyo zePower Point. Phambili!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Izakhelo zePoyinti zaMandla opopayi zasimahla
Iintlobo zoyilo lwegraphic